Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Radio Daljir
Wixii dagaal adduunku soo maray iyo kuwa la qiyaaso in ay dhici doonaan, amaba kuwa hadda socda, la iskuma hayo in taangigu yahay hub kan ugu khatarsan oo lagu dagaalamo. Sidaas darteed asbuucaan waxaan dhegaystayaasha Daljir la qaybsaneynaa 10ka taangi ee adduunka ugu khatarsan.
Isbarbardhigaan waa mid ku salaysan dhibco kala duwan oo ay kamidyihiin xoogga hubka uu ridayo taangigu, shiishka, xawaaraha iyo dhakhsaha uu ku leexan karo, ku istaagi karo ama ku kala jiireyn karo.
Waxaa kale oo dhibcaha isbarbardhigga kamid ah xoogga birta taangiga ama qalfoofka iyo sida xabbadda lidka taangigu ay u kari karto ama aysan u kari karin.
Taangiyadaan ma aha kuwo kala yaraysta, laakiin mid baa aad muhiim u ah, waana tababarka taangiistaha. Sida taangiistuhu u kala fiicanyahay bay mar kasta taangiyaduna u kala fiicnaan doonaan markii dagaal yimaado.